Golaha Shacabka oo wali ku guuleysan la’ inuu Kalfadhigiisa 4-aad yeesho kulankiisa 33-aad – Kalfadhi
Kulanka Golaha Shacabka ayaa markii 4-aad baaqanaya maanta. Waxaa, ilaa iyo 31-kii bishii hore, baaqanaya Kulanka 33-aad ee Golaha. Sida uu Madaxweyne Farmaajo sheegay, waxaa Baarlamaanka Soomaaliya ag yaala ku dhawaad 30 Hindise Sharciyeed, oo sida muuqata uu Golaha shacabku intooda badan uga shaqeyn doono Kalfadhiga 5-aad oo furmi doona 2 bil kadib.
Kulamada Golaha ee caadiga ah, oo dhaca Sabti, Isniin iyo Arbaco, ayaa baaqanayey ilaa Isniin hore. Lama oga, Guddoonka Golaha iyo Xildhibaannaduna ma hadal hayaan sababaha baaqashada Kulamadan Golaha oo, sida uu sheegay Madaxweyne Farmaajo, looga shaqeyn lahaa Hindise Sharciyeedyada qaarkood Golaha horyaal, kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin Hindisaha Sharciga Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka, kan Shaqaalaha Rayidka iyo kuwo kale.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhigan u xirmi doonaa wixii ka dambeeya 10-ka bishan, iyada oo aysan qabsoomin ugu yaraan 50% kulamadii ay ahayd inuu yeesho muddadii 4-ta bil ahayd ee uu u socday Kalfadhiga 4-aad. 2-dii bil ee ugu dambeeyey waxaa hareeyey khilaaf saameeyey dhamaan shaqada Golaha, gaar ahaan tii Guddoonka Golaha, kadib markii ay iyagiiba is khilaafeen.
Kalfadhigan xirmaya kii ka horeeyey ee 3-aad ayuu, sidoo kale, Goluhu khilaaf gorodda la galay, oo waa tii uu ku baxay Afhayeenkii hore ee Golaha, Xildhibaan Maxamed Sh. Cudmaan Jawaari. Hadda, waxaa Golaha u haray 4 Kalfadhi oo kaliya, oo haddii ay 4-ta Kalfadhi ee dhamaatay oo kale noqdaan qasaaro ku ah dalka.
Hase ahaatee, Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, waxa uu 29-kii bishii hore u sheegay Xildhibaannada Golaha Shacabka in ay cashar ka baran doonaan khilaafyadii xiray kulamadii Golaha. ”Khilaafka dhacay waxaan ka qaadan doonaa cashar aan uga nabad galno inuu khilaaf kale dhaco” ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
Waxa uu qiray in ay khilaafyadu halis ku yihiin dhamaan shaqda Golaha, laakiin waxa uu Kalfadhigan 4-aad ee Golaha ku amaanay inuu ahaa kii ay ugu wax qabad badnaayeen. “kalfadhigaan afaraad waa kii ugu shaqadda badnaa, waayo waxaan meel marinay ilaa 4 sharci oo dalka muhiim u ah, halka sadaxdii kalfadhi ee ka horaysay aan meel marinay 3 sharci” ayuu yiri Guddoomiye Maxamed Mursal.